GameHub: Ọba akwụkwọ jikọtara ọnụ maka egwuregwu niile anyị | Site na Linux
N'agbanyeghị ihe ọtụtụ nwere ike iche, GNU / Linux Sistemụ arụmọrụ ugbu a nwere nkwado magburu onwe ya maka a ọtụtụ egwuregwu dị iche iche, gụnyere nke kacha mma mma na aha. Nke a, ekele maka ngwa ndị magburu onwe ya dịka Steam, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ, dị ka GameHub.
Kpọmkwem, GameHub bụ ngwa na n'etiti ọtụtụ ihe na-arụ ọrụ dịka otu n'otu ọba akwụkwọ maka egwuregwu anyị niile, na mgbakwunye na ikwe ka ịlele, budata, wụnye, gbaa ma wepu egwuregwu sitere na isi mmalite dakọtara.
Ugbu a, na ebe nrụọrụ weebụ ya, GameHub dị na a anụ version (ukwu) nọmba 0.15.0-1 na a mmepe mbipute 0.15.0.35-dev. A na-ewepụta nsụgharị stable mgbe arụnyere atụmatụ ọhụrụ ma rụọ ọrụ na-enweghị nsogbu amatara. Versionsdị nsụgharị na-enweghịkarị ọtụtụ atụmatụ na nkwalite nso nso a. Ebe, na nsụgharị mmepe nke GameHub Ha nwere njirimara na nkwalite ọhụụ nke anwale ma ọ bụ nnwale.
Abịa na dị iche iche installable faịlụ na ikwado mmejuputa ya na otutu di iche iche GNU / Linux Sistemụ arụmọrụ. Currentdị nbudata dị ugbu a bụ ".Deb, flatpak na appimage". Ọzọkwa, enwere ike itinye ya site na nchekwa, ahaziri ya na mbụ, belụsọ na GNU / Linux Distro Pop! _OS, Ebe ọ bụ na ọ dị maka ntinye ebe ahụ.
1.3 Nseta ihuenyo nke ngwa arụnyere
Ọ na-akwado egwuregwu ndị na-abụghị ndị amaala yana egwuregwu Linux.
Na-akwado otutu ngwakọ nke ndakọrịta maka egwuregwu ndị na-abụghị nke ala, dị ka: Wine / Proton, DOSBox, RetroArch, na ScummVM. Ọ na-enye ohere ịgbakwunye omenala emulators.
Ọ na-akwado WineWrap, nke bụ otu set nke preconfigured wrappers maka akwado egwuregwu.
Na-akwado ọtụtụ isi mmalite na ọrụ egwuregwu: Steam, GOG, Humble Bundle, na Humble Trove.
Na-enye gị ohere ịgbakwunye (jikwaa) egwuregwu arụnyere na mpaghara.
Na-eme ka ọ dị mfe ịchekwa ma jikwaa mkpokọta egwuregwu DRM na-enweghị ego.
Ọ na-eme ka ọ dị mfe ibudata installers, DLC, na bonus ọdịnaya site na ụfọdụ online nyiwe.
N'ikpeazụ, n'etiti ihe ndị ọzọ, ọ na-enyere ndị overlays nke na-agbanwe agbanwe faịlụ (faịlụ overlays). Ya mere, ọ na - enye gị ohere ịwụnye, wepu, rụọ ọrụ ma gbanyụọ DLC ma ọ bụ Mods na - enweghị dochie faịlụ egwuregwu n'oge ọ bụla. Ebe ọ bụ na a na-echekwa mkpuchi ọ bụla iche iche ma ọ dịghị emetụta ndị ọzọ overlays. Na n'ụzọ dị otú a na-echekwa mgbanwe niile na faịlụ egwuregwu na ndekọ dị iche ma dị mfe ịlaghachi.
Dị ka anyị kwuru na mbụ, enwere ike itinye ya n'ụzọ dị iche iche site na nchekwa na nchịkọta, n'ụzọ dị mfe, ma kọwaa nke ọma na ya gọọmentị webụsaịtị. Maka ọmụmụ ihe ahụ, nke metụtara anyị, echichi ahụ mere site na Ọnụ (njikwa)), na a Distro MX Linux 19 (DEBIAN 10), ebe etinyere ikpo okwu egwuregwu Steam na mbụ.
Usoro dị ka ndị a:
Kwuru nye iwu, kwere ka ịgbakwunye ụlọ ọrụ gọọmentị, gbakwunye igodo nchekwa, depụta ndepụta ngwugwu nke nchekwa niile dị ugbu a na wụnye GameHub site na ebe nchekwa agbakwunyere na mbụ.
Nseta ihuenyo nke ngwa arụnyere
Cheta na: Ọ bụ ezie GameHub M zuru okè mata m ọrụ nnọkọ nke Steam, na ibudata ma wụnye Proton 4.2 na Proton 5.0, site Steam, ha anaghị eme ihe n'ụzọ ziri ezi, agbanyeghị na ejiri m n'aka na, ọ ga-abụrịrị nsogbu dị n'etiti Steam na nke m GNU / Linux Distro, enyela GameHub.
Maka ozi ọzọ na GameHub ya ukara saịtị nwere ike ileta na GitHub, ma ọ bụ chọpụta ihe ndị ọzọ maka ya, dị ka Lutris na Linux na o Gọg, LaunchBox, Photon, Egwuregwu na Windows. Na mgbakwunye na Steam maka nyiwe abụọ.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «GameHub», ihe magburu onwe free na-emeghe iyi egwu egwuregwu ngwa ma ọ bụ n'elu ikpo okwu, dere na Vala iji GTK + 3, maka Fans nke Egwuregwu na GNU / Linux, nwee nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » GameHub: Ọbá akwụkwọ dị n'otu maka egwuregwu anyị niile